Qalalaasaha gobolka Tigray: Xogta goobaha colaadda Waqooyiga Itoobiya - BBC News Somali
Qalalaasaha gobolka Tigray: Xogta goobaha colaadda Waqooyiga Itoobiya
Six-year-old Betlehem Tesfaye lost both her legs in an explosion
Waxaa jiray baaqyo caalami ah oo la xiriira in aan la xakameynin gargaarka iyo hay'adaha gobolka ka howlgalaya.
"Hadda hay'adaha waa loo ogolaaday in ay yimaadaan ayna dadka caawiyaan. Hadda waa xilliga ugu haboon," ayey tiri. Hadalkaas waxay sheegtay xilli ay hor taagnayd dhismo xarun u ahaa TPLF oo ku yaalla Mekelle.
"Waxaan ka fileynaa in ay inoo keenaan gargaarka aan uga baahannahay ayna badbaadiyaan dadkeena - Waa in uu dheeraad ku ahaadaa gargaarka ay dowladda keeneyso."
Leteberhan Assefa, waxay ka mid tahay dadka ka soo qaxay Humera, oo ah magaalo yar oo 450km u jirta Shire, oo ku dhow xuduudda Sudan iyo Eritrea.
Waxyar ka hor inta colaadda aysan gaarin deegaankeeda, gabadheeda ayaa canug lagu soo qalay - markii dagaalka uu halkaas gaaray, waxay la soo qaxday gabadhii umusha ahayd iyo canug yar oo ay wadatay. Xerada waxay ka heleysaa nabad balse maysan helin daryeel", ayey tiri.
Warar kale oo la xiriira colaadda Tigray:
Shan waxyaabood oo caan uu ku yahay gobolka Tigray
"Xasuuq ka dhacay" gobolka Tigray ee Itoobiya
'Sida aan uga badbaaday dagaal 11-saacadood ka socday gobolka Tigray'
Inkastoo dagaalka uu yaraaday hadda, weli kumannaan qof ayaa soo gaaraya Shire - waxaa ku yimaadaan basas buux dhaafay, gawaari xamuul oo dad badan ay saaran yihiin iyo gaari-dameerro,
Barakaca weli sii socda waxaa sabab u ah in amniga uu weli aad u xun yahay iyo in meelaha qaar ay weli ka dhacayaan dagaallo aad u culus.
Xaaladda degdegga ah ee gobolka lagu soo rogay ayaa weli sideedii ah. Waxaa saaran bandow habeenkii ah, waxaana jid-gooyooyiin la dhigay jidadka isku xira deegaannada gobolka.
Si kasta oo dagaalka loo soo afjaro, in la dhayo dhaawacyada waxay qaadan kartaa in muddo ah.
Dadka qaar waxay u arkaan in saameynta iyo dhibaatada dagaalkaas Tigray ay weligeed sii jirayaan.
Qalalaasaha Tigray: Masjid ay "asxaabtii nabiga dhiseen" oo lagu burburiyay dagaalkii Tigray
5 Jannaayo 2021
Qalalaasaha Tigraay: "Xasuuq ka dhacay" gobolka Tigray ee Itoobiya
Qalalaasaha Tigray: Dembiyo dagaal miyaa ka dhacay Itoobiya?
Sida ay dhaqaatiirta Itoobiya uga baxsadeen dagaalkii Tigray
24 Disembar 2020
Qalalaasaha Tigray: 'Dowladda ayaan nahay waana ognahay waxa aad sameyneysid'
Colaadda Tigray: "Walaalkay wuxuu u baahan yahay dawo"
Qalalaasaha Tigray: Sida uu askarigan uga badbaaday dagaal socday 11 saacadood
12 Disembar 2020
Colaada Tigray: Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado
15 Febraayo 2021
"Waan ku guursanayaa ayuu igu yiri balse wuu i khayaamay"
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 21 Sebtembar 2020